Thai Airways dia miatrika ny "Fiainana na ny Fahafatesana" miaraka amin'ny fanampiana kely kokoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Thai Airways dia miatrika ny "Fiainana na ny Fahafatesana" miaraka amin'ny fanampiana kely kokoa
Airlines • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • fanorenana • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Thai Airways - Sary © AJ Wood
Tsy mahagaga ny fanoherana ny fanomezana goavambe goavam-be ho an'ny trosa Thai Airways International (THAI) miakatra hatrany, raha ny fiheveran'ny besinimaro ny fiovana dia misy ny fanovana (azafady ny pun) ao amin'ny AIR. Raha nilaza ny praiminisitra Thailandy Prayut Chan-o-cha Thai Airways homena fotoana farany hitodihana amin'ny fiantsoana azy io ho "raharaham-piainana na fahafatesana" ho an'ny orinasa sy ny mpiasa ao aminy, tena matotra tokoa izy "Nomeko ny THAI dimy taona handaminana ireo olana, saingy mbola tsy nahomby, ”Hoy ​​izy taorian'ny fivorian'ny kabinetra tamin'ny voalohan'ny volana Mey 2020.
Ny Thai Airways International izay manao fatiantoka dia tsy maintsy manolotra drafitra fanarenana amin'ny faran'ny volana raha maniry ny governemanta handinika fonosana famonjena. Ny minisitry ny fitaterana Saksayam Chidchob dia nametraka ny fe-potoana farany teo anelanelan'ny fiakaran'ny fihetseham-bahoaka manoloana ny fampindramambola notohanan'ny fanjakana ho an'ny zotram-pirenena, izay efa niatrika olana ara-bola talohan'ny valanaretina coronavirus, izay nitatitra fatiantoka nanomboka ny taona 2017.
Ny fanoherana ampahibemaso dia miroso amin'ny kitapo fanavotana ho an'ny Thai Airways.
Ho valin'ny krizy, ny orinasam-panjakana dia voalaza fa mangataka indram-bola 58.1 miliara baht ($ 1.81 miliara dolara), antoky ny minisiteran'ny vola izay manana 51 isanjaton'ilay orinasa, saingy tsy dia mazoto loatra ny vahoaka.
Ny fampisehoana ratsy, ny fitantanan-draharaha tsy ara-bola ary ny kolikoly nolazaina dia nampihena ny fatokisana ilay 'reharehan'ny firenena' taloha.
Tsy vita ny drafitra famonjena ary nilaza ny minisitry ny Fitaterana Saksayam Chidchob tamin'ity herinandro ity fa hanolotra tolo-kevitra nohavaozina ny faran'ny volana Mey.
"Raha tsy vita amin'ny volana Mey ny drafitra, dia tsy afaka miroso isika," hoy i Saksayam tamin'ny Reuters, ary nilaza fa ny tolo-kevitra dia tokony hiresaka ny 23 faritra risika rehetra nasongadin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ary mampiseho paikady mazava amin'ny fikirakirana ilay coronavirus vaovao, fampitomboana ny vola miditra , ary ny fitantanana ny fandaniana. "Mila mazava ny drafitra Thai Airways satria ny hetra avy amin'ny hetra ampahibemaso, indrindra rehefa mila mampiasa ny tetibola hitantanana ny virus sy fanampiana ny besinimaro ny firenena," hoy ny minisitry ny fitaterana.
Ny praiminisitra Minster dia nitatitra tamin'ny 12 May fa mbola tsy nahazo drafitra fanarenana ho an'ny Thai Airways International ny kabinetra.
Nampiakatra ny fiheverana fa mety hametraka amin'ny fatiantoka izy io, na dia nilaza aza ny praiminisitra Prayuth Chan-ocha fa ny safidy famonjena rehetra dia tokony hodinihina aloha.
Ireo mpanohana ny drafitra dia milaza fa zava-dehibe ny fanefana ny fahaverezan'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany manoloana ny toekarena izay efa novinavinaina fa hihena mihoatra ny dimy isan-jato amin'ity taona ity. Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany dia maminavina eo anelanelan'ny 14 sy 16 tapitrisa ny vahiny hitsidika ny firenena amin'ny taona 2020, midina hatrany amin'ny 39.8 tapitrisa amin'ny 2019.
Saingy nilaza ny mpitsikera fa tsy tokony hiankina amin'ny volan'ny mpandoa hetra ny orinasa hamahana ireo olana izay voalaza fa misy fitantanana tsy mety sy kolikoly. Ny toe-tsain'ny besinimaro dia tsy mpitatitra nasionaly io fa fikambanana mavesatra amin'ny hetra.
Na dia tsy maintsy milahatra mandritra ny ora maro aza ny olon-tsotra Thai mba hitakiana fizarana vola 5,000 XNUMX baht avy amin'ny governemanta, omena ny Thai Airways tsy misy fepetra izany.
Ny tsy fisian'ny fiaraha-miory ampahibemaso dia miorim-paka amin'ny asa ratsy nataon'ny orinasa, izay nitatitra ny fatiantoka nanomboka tamin'ny taona 2017. Mampitandrina ireo solombavambahoaka fa "loza mitatao ara-moraly" ny famonjena ny mpitatitra.
Ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, izay namandrika fatiantoka 12.04 miliara baht tamin'ny 2019, tamin'ny herinandro lasa teo dia nangataka tamin'ny Stock Exchange of Thailand hamela azy hanemotra ny fandefasana ny tatitra ara-bola ny volana Janoary-Martsa hatramin'ny Aogositra.
Ny mpanohitra dia nanamarika fa ny fonosana fanentanana 1.9 trillion-baht (58 tapitrisa dolara amerikana) natomboka vao haingana mba hanefana ny fiatraikany ara-toekarena n'ny coronavirus dia nanosika ny trosam-bahoaka ho 57 isan-jaton'ny harin-karena faobe. Ny fampindramam-bola fanampiny hanampiana ny Thai Airways dia “mety hidika fa tsy hisy toerana intsony ho an'ireo fonosana fampindramam-bola mitovy amin'izany” amin'ny ho avy.
Ny antoko Forward Forward, dia nilaza fa ny drafitra fanarenana rehetra dia tokony hisy fepetra apetraka amin'ny làlan'ny làlan-drivotra anaovana bankiropitra, amin'izay dia hampangatsiaka ny trosany.
Mpikatroka mpianatra, Tanawat Wongchai, nandefa tao amin'ny Twitter. ”Tohero ny fampiasana vola mpandoa hetra mba hanavotana ny Thai Airways tsy misy farany, indrindra tsy misy drafitra fanarenana mazava. Ampiasao ny vola hampivelarana ny fanabeazana, handray soa ny Thai. Fa ampiasao ny vola hanavotana ny Thai Airways rehefa mijaly ny olona, ​​inona no azon'ny Thai? ” Tanawat dia nilaza tamin'ny lahatsoratra iray, izay naverina avoaka 8,100 XNUMX.
Tsy vao sambany ny orinasa no nanandrana nanarina ny maodelin'ny orinasany. Tamin'ny 2015 dia nanandrana dingana mitovy amin'izany izy tamin'ny alàlan'ny fanalefahana ny asa, ny zotra ary ny fiaramanidiny mba hanatanterahana ny fifaninanana.
Ny minisitry ny fitaterana Saksayam dia nilaza fa ny drafitra vaovao dia tsy maintsy manome paikady mazava amin'ny fomba hiatrehana ny virus coronavirus.
Ny olana sedrain'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia nahavaky lohateny lehibe rehefa nametra-pialana tamin'ny filohan'ny orinasa i Sumeth Damrongchaitham tamin'ny volana martsa taorian'ny voalaza fa tsy nankatoavin'izy ireo ny drafitra fanarenana.
Raha mitanisa ny areti-mandringana, ny Airbus France tamin'ny volana aprily dia nisintona orinasa iraisana 11 miliara baht hananganana trano fikojakojana, fanamboarana ary fanamboarana ao amin'ny seranam-piaramanidina U-Tapao any Rayong.
Momba ny mpanoratra:
Andrew J. Wood dia teraka tao Yorkshire England, izy dia hotely matihanina, Skalleague ary mpanoratra mpanoratra. Andrew dia 48 taona nampiantranoana sy niainany ny dia. Nahazo diplaoma tao amin'ny hotely Napier University, Edinburgh izy. Andrew dia talen'ny Skål International (SI) lasa teo, Filoham-pirenena SI Thailand ary filohan'ny SI Bangkok ankehitriny ary VP an'ny SI Thailand sy SI Asia. Mpampianatra tsy tapaka ao amin'ny Oniversite isan-karazany any Thailand izy, ao anatin'izany ny Sekolim-pianarana fandraisam-bahiny ho an'ny oniversite Assuming sy ny Sekolin'ny Hotely Japan any Tokyo.